Abokhokho bethu wayekholelwa ukuthi igama umthelela esithile phetho yomuntu. Kuthinta ingqondo, yakha uhlamvu, ichaza umuntu, izifiso nezenzo. Zonke impumelelo ixhomeke endleleni wena ufonela umuntu kanye nenkululeko yakhe, injabulo nothando ngqo exhumene igama.
omama abaningi futhi obaba ngokukhetha amagama baby, ngokusekelwe kulokho kusho nokuthi yini isiphetho lithembisa. Uma oyilindele intombazane, ukucabanga ngalokho igama Aelita wakhe. Aelita - igama, ukubaluleka lapho ungafunda kulesi sihloko.
Ngokokuqala ngqá igama uvele noveli etemibhalo ngo-1923. Umbhali wayo kuyinto Alexey UTolstoy. Ngemva kwalokho, umbhalo iye sitlolwe ngezilaleli yobusha. Ngokwe abalobi, Aelita - ". Ukukhanya lokugcina izinkanyezi" Princess of planethi ebomvu, i-Mars kanye yayo igama ulimi uhumusha njengoba Esikhathini esizayo, uye kwakuqala ukwanda. Nakuba ukungasebenzisi, kodwa kulezizinsuku ungakwazi ukuhlangabezana amantombazane elinegama elifanayo.
Aelita (igama): Inani
It isetshenziswa ngokuyinhloko phakathi Russian, Ukraine, Armenia, Kazakhs futhi AmaTatar. Abantu bakholelwa izinto eziningana incazelo. Ngokusho kwenye inguqulo, Aelita - igama, ukubaluleka elisemandleni umsuka Igama lesiNgisi elithi "umoya wokupha." Ngakolunye - umsuka ngesiGreki, ehlanganisa izingxenye eziningana: "Aer" - umoya, "lithos" - itshe, kodwa ndawonye ke iphathwa njengendlela "itshe kusukela emoyeni."
Patron Saint kosuku kusuka Aelita sika akukho - igama ayikho uhlu izenzakalo ezinkolo ezihlukahlukene.
Ukubhula futhi izimpawu
Inani lamagama - 3. It kulingana abantu yokudala, nesu. Abathwali igama Aelita siphumelele ezemidlalo kanye ubuciko, bayajabula futhi ewubuciko, kodwa zidinga zokuqapha gqwa. Uma intombazane has ibe umfundisi omuhle (noma Isihlobo esisondelene umuntu), impumelelo angenamkhawulo empilweni kufinyelelwa - ne ikhono elikhulu kanye sokuvalelisa amazwi ezinhle Aelita ngangokuba ngingagudluza izintaba. Uma isikhathi akusho lokukunika emandla we "Trika" endaweni efanele - maye, umnikazi igama izohluleka. Uma nibonakala sengathi umuntu ongangeneki, ngaphakathi kuye usengozini futhi ebucayi.
Izimpawu banegama elandelayo. Iplanethi - Saturn. Izakhi eziyisisekelo - emhlabeni, abandayo. Izimpawu Zodiac - Capricorn futhi Aquarius. Metal - phambili, umbala - mpofu omnyama black. Usuku eyinhloko ngesonto - ngoMgqibelo. ngenxa amatshe - amashohamu, magnetite, obsidian. Ukuvikela izitshalo - Thyme, nemisayipuresi, mandrake, uphayini, wrestling, ivy, ejikijolweni, Belladonna. Ukuncelisa izilwane - uchakide, imbongolo, ikamela, intuthwane ufudu.
Meaning of izinhlamvu
ukunakwa okuningi ikhokhelwa cazelo of ngamunye incwadi ngabanye. Ngaphakathi the gama of Aelita okulandelayo:
A umusho, bofeleba, ekuqaleni zamagama - isifiso somuntu ngoba isiqalo esisha, ukuqaliswa izifiso, ukubaluleka okukhulu ezolile ngokomzimba nangokwengqondo.
E. Ikhono ukubona okushiwo izinto, ukuqonda imbangela umcimbi, kanye okushiwo abanye kweqiniso. ulwazi kahle kakhulu ngezinye izilimi, ilukuluku, isifiso babebomuntu kwamasiko, umphakathi abafundile.
L. lokusungula, luvelo konke kwaba kuhle, nesifiso sokuxoxela imizwa nabantu obathandayo, search emi ubizo.
I. Uthando ngabantu, izilwane kanye nezwe lonke jikelele. Umusa, ukuzwela, uzwela evuthiwe. inhlangano engokomoya lesidze, yothando.
T. A evuthiwe umuzwa, uthando iqiniso nobulungisa. Ukubizelwa esenzweni: akukho isikhathi ukuhlala endaweni, udinga ukusebenzisa isikhathi njengoba kahle ngangokunokwenzeka, ukuze ube nesikhathi ukusungula zonke izinhlelo kanye imisebenzi.
A uphawu ekuqaleni, etholakala ekupheleni igama. Kusenza siphile njalo, amandla never-ophela, okuhloswe ngazo ulwazi olusha.
Uma uthanda ezihlukahlukene amagama kumnandi, ucabange indlela igama inkosazana yakho kancane Aelita. Abanikazi ngaleli gama engavamile ngokuvamile beqiniseka amakhono abo, lapho ubizo ezindaweni ezikhethiwe zokuphila. Naphezu njalo kwentuthuko intombazane webumbacambili esingokwemvelo: ubona itarget, azi ukuthi kumelwe enzeni, kodwa liyashintshashintsha futhi ngezinye izikhathi wawungaphansi nezinye.
Uneziqu omunye umbono siqu ngezinto. Uyabathanda ukuhlola entsha, nakuba ngaso sonke isikhathi beqiniseka ngezinkolelo zabo. Umbono akuvamile sishintsha. Uthambekele Ukuzihlola, ngakho ezungeze Aelita wadala uhlobo odongeni, okwenza kube ngendlela engaqondakali kakhudlwana.
Ngiseyingane, intombazane akufanele kugcine nemiqondo yayo. Angakwazi uzame yonke imisebenzi kungenzeka, futhi ekugcineni ukuthola into ukuthi uyakuthanda ngempela. Aelita okungadonsela i umsebenzi ongajwayelekile ezihlobene, imfashini. Enye yezindawo eziyinhloko zokuphila yentombazane - travel.
Aelita - umngane omuhle, enendawo nohlu olubanzi izithakazelo. Utsandza abantu abanethonya futhi wakuthola nezicebi, izindlu ezinkulu, izingubo nice.
Aelita ivame ukubheka stylish. Izithombe amantombazane njalo zihlukaniswa okwakhe. Bavame awahlangabezani fashion, kodwa ngaso sonke isikhathi esiyingqayizivele futhi kunokulinganisela yini. Nokho, umuntu kufanele akhumbule isimiso: izingubo kufanele agcizelele nesithunzi nokubabazeka esikhanya kakhulu, zinhlobo okubangela kungaba okwesabisa abantu. Kukhona Yiqiniso, izingubo, futhi uyiswa ingqondo.
sobuhlobo obunothando. Ukuhambelana namanye amagama
amagama aqanjiwe ngokuvamile athembisa abantu injabulo, kodwa umgwaqo ukuze kuzoba nzima futhi eside. Izimfanelo main - charm, romance. Ngamunye umlingani Aelita ithola into enhle, futhi ubuhlobo bakhe - indlela ukumambula side yabo izinkanuko zenyama.
Othandweni Aelita weqiniso noqotho, uhlamvu ithenda ithambisa futhi inika ukuphila obunobunye. Naphezu kwalokhu, ngezinye izikhathi ukuthuthukiswa ubudlelwane nomlingani awulona isikhathi esanele amantombazane kusho umsebenzi unomphela.
Ngokuhamba kwesikhathi, imizwa umlingani kungase ishabalale. Aelita kudlula ikhefu kalula, kodwa inkumbulo lona luhlala phakade enhliziyweni yakhe. Ilokhu reliving phezu nekuhlatiya, intombazane ithola imbangela entsha nomphumela, eqhathanisa kokwake nale.
Injabulo uthando nomshado Aelita thola Alexander, Arseny, Roman, u-Anton, Igor Artemyev, u-Oleg, uVictor.
Uma igama lakho - Aelita, e ushaya amandla eqinile, une ubuntu ezehlukile. Ngeshwa, emzamweni ukubona amandla ungakwazi wehluleka. Kukho konke ukuphila kuzodingeka ukunikeza amathuba amaningi ukuze kuzuze kuphela umgomo oyifunayo kakhulu. Themba umzimba wakho ukuthi ishaya esifubeni sakho - inhliziyo. Kuyinto e izikhathi ukungaqondi kahle bakutshele ukuthi uzoqhubeka kanjani. Esikhathini zikhathi ezinzima zokuphila nje uzame ukuze bamuzwe.
Uma kunguwe abazali, abalandeli amagama okungavamile, qiniseka ukuthi cabanga ukuze ingane yakho njengegama Aelita. Okusho siye sibuyekezwe.
Indoda elinegama elifanayo, lolo ngesikhathi sokuhlwanyelwa necebo Alexei UTolstoy, kuyinto isiphetho ezithakazelisayo. Isifiso sokuvelela salezi ze- Omkhulu, ababikezeli, isithakazelo emisebenzini ehlukene - konke lokhu kuzokusiza intombazane ukuba uphumelele futhi uthathe kuleli phambili ekuphileni.
Minerals amaseli nencazelo yawo. Indima izinto amaminerali kuseli
Film umsebenzi futhi ukuphila komuntu Rouz Makgouen. Ingozi: ngaphambi nangemva.